March 17 Update – Mandalay International Science Academy
As mentioned inaprevious message, enrolment is already open for next school year. If you wish to benefit from the March discount, you must contact the school within the coming two weeks.
These are our current phone lines:
– 09 43060027
– 09 797747190
– 09 43060423
– 09 755838633
To clarify any misconceptions, we would like everyone to know that school fees have not been raised for any age groups, and that online discounts for 2020-21 will be deducted when students enrol for 2021-22.
If you would like to meet with the school management team we would be happy to make an appointment.
လေးစားရပါသော မိဘများ ခင်ဗျာ
ယခင်ပို့ပြီးဖြစ်သော အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း လာမည့်စာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မတ်လအတွက် discount များရရှိလိုပါက လာမည့်ရက်သတ္တပတ်မှစ၍ နှစ်ပတ်အတွင်း ကျောင်းရုံးခန်းကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
– ၀၉ ၄၃၀၆၀၀၂၇
– ၀၉ ၇၉၇၇၄၇၁၉၀
– ၀၉ ၄၃၀၆၀၄၂၃
– ၀၉ ၇၅၅၈၃၈၆၃၃
လူကြီးမင်းတို့ နားလည်မှုမလွဲစေရန် ထပ်မံရှင်းပြလိုပါသည်။ လာမည့်ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းလခများကို မည်သည့်အတန်းအတွက်မှ တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းမရှိကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော online discounts များကိုလည်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ စာသင်နှစ်အတွက် စာရင်းပေးသွင်းသော အခါ လျော့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုပါက ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကာ စီစဉ်ပေးပါမည်။